A kpọgaara Jizọs Pọntiọs Paịlet | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
NDỊ SANHEDRIN EKPEE JIZỌS IKPE N’ỤTỤTỤ
JUDAS ISKARỊỌT ANWAA ỊKWỤGBU ONWE YA
A KPỌGAARA JIZỌS PAỊLET KA PAỊLET MAA YA IKPE ỌNWỤ
Chi abọwala mgbe Pita gọnahụrụ Jizọs nke ugboro atọ. Ndị Sanhedrin ekpechaala Jizọs ikpe ahụ iwu na-akwadoghị ha kpere ya n’abalị ma lasaa. Ugbu a chi bọrọ n’ụtụtụ Fraịdee, ha zukọkwara ọzọ. Ọ ga-abụ na ha chọrọ ime ka o yie ka iwu ọ̀ kwadoro ikpe abalị ahụ ha kpere Jizọs. A kpọpụtaara ha Jizọs.
Ụlọikpe ahụ jụrụ Jizọs, sị: “Ọ bụrụ na ị bụ Kraịst, gwa anyị.” Jizọs gwara ha, sị: “Ọ bụrụgodị na mụ agwa unu, unu agaghị ekwere ma ọlị. Ọ bụrụkwa na mụ ajụọ unu ajụjụ, unu agaghị aza ya ma ọlị.” Ma, Jizọs mere ka ha mara na ọ bụ ya bụ Nwa nke mmadụ ahụ e kwuru okwu ya na Daniel 7:13. Ọ gwara ha, sị: “Site ugbu a gaa n’ihu, Nwa nke mmadụ ga-anọdụ ala n’aka nri dị ike nke Chineke.”—Luk 22:67-69; Matiu 26:63.
Ha nọgidere na-ajụ ya, sị: “Ị̀ na-ekwu na ị bụ Ọkpara Chineke?” Jizọs zara ha, sị: “Unu onwe unu na-ekwu na m bụ.” Ihe a Jizọs zara ha mere ya adị ha ka ò kwuluru Chineke, n’ihi ya, na o kwesịrị ọnwụ. Ha jụrụ onwe ha, sị: “Gịnị mere àmà ọzọ ji dị anyị mkpa?” (Luk 22:70, 71; Mak 14:64) Ha kere Jizọs agbụ ma kpọrọ ya gakwuru gọvanọ ha bụ́ onye Rom, aha ya bụ Pọntiọs Paịlet.
O nwere ike ịbụ na Judas Iskarịọt hụrụ Jizọs mgbe a kpọ ya na-aga na nke Paịlet. Mgbe Judas hụrụ na a maala Jizọs ikpe ọnwụ, ọ kwara mmakwaara. Ma, kama ọ ga-eji obi ya niile chegharịa ma rịọ Chineke mgbaghara, ọ gara chịghachịrị ndị isi nchụàjà mkpụrụ ego ọlaọcha iri atọ ahụ ha kwụrụ ya. Judas gwara ha, sị: “Emehiere m mgbe m raara ọbara ezi omume nye.” Ma ndị a obi tara mmiri gwara ya, sị: “Nke ahụ ọ̀ gbasara anyị? Nke ahụ bụ okwu aka gị!”—Matiu 27:4.
Judas wụsaara ha mkpụrụ ego ọlaọcha iri atọ ahụ n’ụlọ nsọ ma nwaa igbu onwe ya. Ihe a o mere bụ mmehie, tụkwasị na nke o mere eme. Mgbe Judas chọrọ ịkwụgbu onwe ya, ọ dị ka alaka osisi o kenyere ụdọ o ji akwụgbu onwe ya ọ̀ gbajiri, ya adaa n’elu nkume dị n’okpuru ebe ahụ, afọ ya agbawaa.—Ọrụ 1:17, 18.
Oge a kpọ Jizọs gaa n’obí Pọntiọs Paịlet ka bụ ụtụtụ. Ndị Juu kpọ́ ya gaa ebe ahụ ekweghị abanye n’obí Paịlet. Ha chere na ha banye, ọ ga-eme ka ha ghara ịdị ọcha. Ọ bụrụ na ha adịghị ọcha, ha agaghị eri nri Ememme Achịcha Na-ekoghị Eko, bụ́ nke ga-amalite n’abalị iri na ise n’ọnwa Naịsan. A na-eme ememme a n’oge Ememme Ngabiga.
Paịlet pụtara n’èzí jụọ ha, sị: “Olee ebubo unu na-ebo nwoke a?” Ha zara ya, sị: “A sị na nwoke a abụghị onye na-eme ihe ọjọọ, anyị agaraghị enyefe ya n’aka gị.” Paịlet nwere ike ịna-eche na ha chọrọ ịmanye ya ka o kpee Jizọs ikpe. N’ihi ya, ọ sịrị: “Kpọrọnụ ya, kpeekwanụ ya ikpe dị ka iwu unu si dị.” Ndị Juu gosiri na ha chọrọ ka e gbuo Jizọs. Ọ bụ ya mere ha ji kwuo, sị: “Iwu akwadoghị ka anyị gbuo onye ọ bụla.”—Jọn 18:29-31.
O doro anya na ọ bụrụ na ndị Juu anwaa anwaa gbuo Jizọs n’oge Ememme Ngabiga a, o nwere ike ịkpata ọgba aghara. Ma, ọ bụrụ na ha emee ka ndị Rom gbuo Jizọs maka ịgba ọchịchị Rom mgba okpuru, ọ ga-eme ka ndị mmadụ chee na aka ha adịghị n’ọnwụ Jizọs.
Ndị ndú okpukpe agwaghị Paịlet na ha amaala Jizọs ikpe ọnwụ n’ihi ikwulu Chineke. Ha hapụrụ ebubo a ma bo ya ebubo ndị ọzọ. Ha kwuru, sị: ‘Anyị chọpụtara na nwoke a  na-ekpu mba anyị ihu,  na-amachibido ịkwụ Siza ụtụ isi,  na-ekwukwa na ya onwe ya bụ Kraịst, bụ́ eze.’—Luk 23:2.
Ebe Paịlet na-anọchiteanya ndị Rom, ịnụ na Jizọs na-ekwu na ya bụ eze kwesịrị inye ya nsogbu n’obi. N’ihi ya, Paịlet banyere ọzọ n’obí ya, jụọ Jizọs, sị: “Ị̀ bụ eze ndị Juu?” Ihe ajụjụ a ọ jụrụ Jizọs pụtara bụ, ‘Ị̀ daala iwu ndị Rom kwuo na ị bụ eze, ebe ọ bụ Siza bụ eze?’ O nwere ike ịbụ na Jizọs chọrọ ịma ihe ndị Paịlet nụrụla gbasara ya. N’ihi ya, ọ jụrụ Paịlet, sị: “Ọ̀ bụ gị chepụtara ihe a ị na-ekwu, ka ọ̀ bụ ndị ọzọ gwara gị banyere m?”—Jọn 18:33, 34.
Paịlet mere ka ó nweghị ihe ọ ma gbasara Jizọs. Ọ zara Jizọs ihe gosiri na ọ chọrọ ịmata onye Jizọs bụ. N’ihi ya, ọ zara Jizọs, sị: “Àbụ m onye Juu? Mba gị na ndị isi nchụàjà nyefere gị n’aka m. Gịnị ka i mere?”—Jọn 18:35.
Jizọs achọghị ka a hapụ ikwu gbasara ebubo ahụ e boro ya na ọ bụ eze kwuwe ihe ọzọ. Ọ zara ajụjụ otú ọ ga-abụ na o juru Paịlet anya.
Ndị isi nchụàjà amaghị ihe ha ga-eji mkpụrụ ego ọlaọcha ahụ Judas wụsara n’ụlọ nsọ mee. Ha kwuru, sị: “Iwu akwadoghị ịwụnye ha n’ebe dị nsọ a na-edebe akụ̀, n’ihi na ọ bụ ego ọbara.” N’ihi ya, ha ji ego ahụ zụọ ala onye ọkpụite, bụ́ ebe ha ga na-eli ndị bịara abịa. E bidoro ịkpọ ala ahụ “Ala Ọbara.”​—Matiu 27:6-8.
Gịnị mere ndị Sanhedrin ji zukọọ ọzọ n’ụtụtụ?
Olee otú Judas si nwụọ? Gịnị ka e ji mkpụrụ ego ọlaọcha iri atọ ahụ mee?
Olee ebubo ndị Juu boro Jizọs, bụ́ ndị ha chọrọ ka Paịlet jiri maka ha gbuo Jizọs?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Ndị Sanhedrin Ekpee Jizọs Ikpe, Mechaa Kpọgara Ya Paịlet
jy isi 127 p. 290-291